Utata wabakhupha abantwana baseJamani kukhuseleko lonyana wakhe nentombi yakhe.
Inkqubo yaseRussia yafudusa abantwana eJamani kukhuseleko lonyana nentombi yayo. UNikolai Erney wayehlala kwaye esebenza eJamani iminyaka eliqela, de unyana omkhulu waya esikolweni. Umfundi wokuqala wamabakala waba lixhoba lohlaselo. Bamkrwitsha, bambetha, bamgrogrisa ngokumbulala kwaye "bamnqumla intloko." Ukuphendula ukubethwa komntwana waseRussia kwisikolo saseJamani, urhulumente waseRussia wavumela umntwana waseRussia u-Mxim Erney ukuba afunde kwisikolo esiphakamileyo soonozakuzaku kummeli waseRussia eBonn. Urhulumente wase-Jamani wamnqanda umntwana wase-Russia u-Maxim Erney ukuba afunde kwisikolo esiphakamileyo soonozakuzaku kwi-Russian Consulate e-Bonn, efuna ukuba umntwana wase-Russia aqhubeke nokuya ngokungqongqo kwisikolo sase-Jamani ukuze abe lixhoba lokubethwa, ukubetha abantwana yinkqubo yokukhula kwabantwana kwisikolo saseJamani.
"Kwiveki ephelileyo, ndibakhuphile abantwana bam eJamani" -liqala njalo ke ibali lomprofeti waseRussia obaleke eYurophu ukuze akhusele unyana wakhe nentombi yakhe.
Ngoku urekhoda iividiyo kuhlobo lokuvuma izono kwaye ulilayishe kwiYouTube.
Kuzo, ibali losapho olunye, nangona kunjalo, iinkqubo ezichaziweyo zihamba ngaphezulu kwesakhelo secandelo elinye loluntu.
UNikolai Erney wayehlala kwaye esebenza ngempumelelo kwiRiphabhlikhi yaseJamani iminyaka eliqela, de unyana omkhulu waya esikolweni, apho ibanga lokuqala laba lixhoba lokuhlaselwa, ukukrwitshwa nokubethwa, kwaye woyikisa ngokubulala wanqumla intloko.
Esi sisicatshulwa esivela kumagama omfundi ngokwakhe. Ukuxela, umthombo wokuxhatshazwa yayingumntwana omnye kuphela, umntwana ophuma kusapho lweembacu zaseAfghan. Nangona kunjalo, njengoko kwafumanekayo, abafuduki abasuka kwiindawo ezazifudula zisingelwe phantsi ezinjengeAfghanistan okanye iLibya, eJamani, abanako ukulawulwa.
Ke, endaweni yokusombulula ingxaki, ootitshala bakhetha ukuthula malunga nale meko. Kwaye abo bazama ukuvukela basinda nje esikolweni.
Ngokubanzi, le meko ayisiyongozi kuphela, kodwa ayikhuselekanga. Kwenzeka ntoni, Zinaida Kurbatova uya kuchaza ngokweenkcukacha. Ukubulisa. Ngaba usifumene isikolo eRashiya?
Sele ifunyenwe, isikolo esiqhelekileyo eMoscow. EJamani, umdwelisi weenkqubo uNikolai Erney wayenomsebenzi owaziwayo, kwiibhanki ezinkulu, indlu enemigangatho emithathu, ukuchuma okupheleleyo, kodwa ubomi kwafuneka butshintshe kakhulu.
Abantwana zezona zinto ziphambili, ukongeza kunyana wesikolo ohlaselwe ngumbaleki ofunda naye, kukho intombi kusapho, uNikolai unesizathu sokukholelwa ukuba xa umntwana esiya kwisikolo sikarhulumente saseJamani, imeko iya isiba mandundu.
UNikolai unencwadana yokundwendwela yaseJamani, ungummi waseJamani, usapho lucele ukuba lukhusele umntwana wabo kuyo yonke indawo, kodwa abakhuselekanga, kwanokuqonda, uvelwano.
Kule ngxaki, ngokukodwa eyethu, yonke into ibibandakanyekile apha, i-Duma State Duma, uyaqonda? IOfisi yoMtshutshisi Jikelele yiJamani, Chancellor Merkelevsky, kuba sinolwazi kuyo yonke indawo. Oko kukuthi, kucebisa ukuba ukuba le ngxaki iphinda iphinda kwesinye isikolo, kuya kubakho ingxaki kwakhona.
Inkwenkwe, imbacu evela eAfghanistan, yabetha kungekuphela nje unyana wakhe uNikolai, kodwa nabanye abantwana kwisikolo sikarhulumente. Omnye ude wafaka ifolokhwe emqaleni. Mhlawumbi umgibeli omncinci ukhubazekile ngokwengqondo, kodwa impilo yakhe, kubonakala ngathi, ayinakuze ihlolwe.
EJamani, kukho inkqubo elukhuni, enkulisa kugcinwa iphepha ledosi labo bonke abantwana, yonke into irekhodwe, kwaye ngokweziphumo zedosi, abantwana baya esikolweni. Iimbacu azihambi kwiinkulisa, akukho fayile okanye izatifikethi zonyango, zithathwa nangayiphi na imeko.
Kwaye ke, ukuba baziphatha kakubi, wonke umntu uthule.
Izinto ezininzi zixolelwe ngokulula. Oko kukuthi, umbaleki wayenokubetha umntwana waseJamani okanye waseRussia, imbacu yaxolelwa. Ukuba umntwana waseRashiya okanye waseJamani ubetha imbacu, wayesohlwaywa ngokuqatha.
Kukho enye ingxaki: abantwana bafundiswa ukunyamezela, hayi ukutshintsha. Unyana kaNikolai waya kwi-judo ngenxa yobundlobongela bomfundi afunda naye - imbacu. Kodwa kwakungenakwenzeka ukuba usebenzise dexterity kunye namandla akho ngokunxulumene umoni. Isangqa esikhohlakeleyo. Ke ngoko, usapho lwaya eMoscow, kwaye inkwenkwe yase-Afghanistan, ngeli xesha, yaququzelela iqela labantu abasixhenxe, yabetha abo yayifunda nabo kwaye yathatha iifowuni. Nangona kunjalo, abo bahlala eJamani ixesha elide bathi zininzi ngakumbi izigwenxa zababaleki abancinci abanolutsha.
Ezi zinto zingenakoyiswa ngokupheleleyo kwaye zingenazo iiseyile, kwaye ulutsha olunolunya kakhulu lonyanzelisa eyabo imithetho, kwaye ngokubanzi, ndiyaqaphela ngokumothusayo ukuba amadoda amadala aseJamani awaniki nakanye kwaye awathethi kwanto kwaphela.
Ngendlela, esi sisihloko esibaluleke kakhulu, kuyo yonke indawo, kuyamangalisa ukuba amaJamani angazenzi naziphi na izimvo.
AmaJamani cwaka, ngoko UNikolai Erney, owathi ngoko nangoko waxelela utitshala kwintlanganiso yokuqala yabazali malunga yokuziphatha ayamkeleki yeembacu waza wohlwaywa, okanye mandithi, ukohlwaya unyana wakhe, waqalisa ukujongela phantsi amabakala kwimathematika - oku isifundo apho Mxim wenza krelekrele.
Ewe akukho nto intle izakwenzeka. Ndifunde udliwanondlebe noNikolai. Ewe, lo ngumatshini, ngoku iJamani ifumana aba bafuduki ukuze babe nomatshini wokuvelisa abantwana, ngelixa uMerkel enguKhansela, ii-arhente zogcino-mthetho zisoyika ukungamkholisi.
Akukho semthethweni ukuthatha umntwana esikolweni okanye ukufundela ekhaya eJamani Ngentsimbi ye-24 bayakunkqonkqoza emnyangweni wakho asuswe umntwana kusapho, kwaye ukuthumela umntwana kwisikolo sabucala kuyabiza nokuba ngumdwelisi weenkqubo ophumeleleyo. Intsapho ifudukile, ngoku uMaxim uza kuya kwisikolo esiqhelekileyo saseMoscow kwibanga lesi-2 ngo-Septemba 1.
Sinokunqwenela kuphela oneminyaka esixhenxe ubudala, u-Maxim Erney ukuba le meko ayinagalelo kuphuhliso lwezakhiwo kunye noloyiko, njengoko, njengoko usazi, luvela ebuntwaneni.
Ukuze alibale ngokukhawuleza konke oku.
Zinaida Kurbatova. Ndlelantle eYurophu.